RAGGII LAGU QABTAY DARIIQA U DHEXEEYA HARGEYSA IYO BERBERA OO SAXAAFADDA SI TOOS AH LOO HOR KEENAY
Hargeisa: Shantii nin ee lagu qabtay tuulada Dhoqoshey ee gobolka Togdheer 19kii March, kadib markii ay fuliyeen weerar argagixiso oo lagu diley haweenay u dhalatay dalka Kenya, una shaqaynaysey hay’adda Jarmalka ah ee GTZ ayaa markii u horreysey maanta la tusay saxaafadda Somaliland, isla markaana loo ogolaaday inay sawirro ka qaataan.
Shantaas nin waxa markii la qabtayba la aqoonsaday laba ka mid ah oo u dhashay Somaliland. Hase yeeshee, saddexda kale oo la sheegay inay u dhasheen Soomaaliya, gaar ahaan qabiilka “Hawiye” ayaa shaki badan laga qabey inay yihiin cidda ay sheegteen. Waxa kale oo lays weydiinayey sababta looga qariyey dadweynaha, iyada oo markii la soo qabtay raggaasi loo diidey in saxaafaddu sawiro ka qaaddo dadkana loo baahiyo.
Ogolaanshahanina waxa uu ka dambeeyey shakiga dadweynuhu ka qabo aqoonsi la’aanta raggaas, gaar ahaan saddexda nin ee la sheegay inay reer Soomaaliya yihiin, balse Cabdulqaasim uu beeniyey inay beeshiisa ka soo jeedaan iyo in gebi ahaanba loo diidey in la arko ama saxaafaddu sawiradooda soo gudbiso, taas oo turjumado kala duwan laga bixiyey, iyada oo ay dad badani ka walaacsanaayeen in raggaas la beddelo, qaar kalena ay qabeen in aanay ahayn beelaha ay sheegteen. Axsaabta mucaaradka ah ayaa iyaguna tuhumada iyo dareemada noocaas ah muujiyey marar badan, calaamad su’aalna geliyey sababta loo qarinayo raggaas ama maxkamad loo keeni waayey. Sidoo kale, wargeysyada madaxa bannaan ee ka soo baxa Hargeysa ayaa marar kala duwan ka dalbaday Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo hay’adaha dowladda ee ku shaqada leh in la tuso raggaas si ay sawirro uga qaadaan, iyaga oo ka duulayey dareenka dadweynaha ee arrintaas la xidhiidha.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa ugu dambayntii maanta amray in saxaafadda madaxa bannaan iyo ta dowladdu ay la kulmaan maxaabiistaas oo ku xidhan Xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysas, iyada oo wargeysyada madaxa bannaan, warbaahinta dowladda iyo Televishanka Hargeysa mid kasta loo sheegay inay cid u soo dirtaan Taliska Ciidanka Asluubta, halkaas oo si taxadir leh loogu kaxeeyey Xabsiga weyn.
Weriyayaasha oo mid mid loogu keenay shantaa nin, waxay weydiiyeen su’aalo la xidhiidha halka ay ka yimaaddeen iyo dembiga loo haysto. Saddexda nin ee aan la aqoonsan ayaa weriyayaasha si caadi ah ula hadlay, isla markaana waxay ka warrameen meesha ay u dhasheen iyo sababta ay halkan u yimaaddeen, iyadoo ay dhammaantood qirteen inay dembiga loo haysto ay galeen. Saddexda eedaysane oo ah wiilal dhallinyaro ah waxay sheegteen inay ka soo kala jeedaan Beelaha Murursade, Duduble iyo H/Gidir, Saleebaan ee Qabiilka Hawiye, Xamarna ay ka yimaaddeen.
Dhinaca kale, eedaysanayaashaas oo aan ilaa iyo hadda maxkamad la horkeenin ayaa Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland, mudane Ismaaciil Aadan Cismaan, shir jaraa’id oo uu shalay qabtay waxa uu ku sheegay in baadhistii ay dhammaaday. Hase yeeshee, waxa uu sheegay in hakad ku yimi hawsha baadhista, kadib markii Shantii nin ee lagu qabtay Dhoqoshey iyo falalkii hore ee ka dhacay dalka sida Dilkii Shaqaalihii SOS ee Sheekh, kii Boorame iyo lacag lagu dhacay Wajaale ay dhammaantood xidhiidh leeyihiin.
Waxa kale oo uu sheegay in baadhista ay kala qaybqaadanayaan Khuburo Ingiriis ah oo Boolis ah, kuwaas oo uu sheegay inay dalka yimaaddeen isla markaana ay qaateen Qalabkii lagu qabtay raggaas, DNA-na ay ka qaadeen. Haatana waxaanu Ingiriiska ka sugeynaa ayuu yidhi in Booliska Britain uu ku soo celiyo Jawaab iyo qalabkii ay qaadeen. Sidoo kale, waxa uu sheegay inay doonayaan in Khuburadaasi ay isaga DNA ka qaadaan ninkii lagu qabtay Beer Jimcihii.
Sawiro kale iyo su'aalahii lagu weydiiyey ragaasi iyo jawaabtii ay ka bixiyeen kala soco somalitalk.com maalmaha soo socda haddii alla idmo.